Mitohy ny fikarohan’ny zandary ilay botry iray antsoina hoe Sofindraza nalain’ny jiolahy an-keriny niaraka tamin’ny takalon’aina, ny faran’ny herinandro teo. Nisedra olana teny ambony ranomasina ity botry ity ka niantsona teo amin’ny fari-dranomasin’i Soanenga. Nisy mpandeha iray namoaka famaky sy sabatra ka namono ireo olona tao anaty botry. Nisy mpivady afaka nanavo-tena nitsambikina tany anaty ranomasina. Lasan’ilay jiolahy ny botry niaraka tamin’ireo takalon’aina miaraka amin’ny entana nentin’io botry io.
Mitaintaina avokoa ny ankamaroan’ireo Karana monina ao Mahajanga taorian’ilay fakana an-keriny teratany Karana iray tompona tranombarotra iray ao Mahabibo Mahajanga. Hatreto tsy mbola nisy mangirana momba ireo Karana nisy naka an-keriny na ilay teny Behoririka na ilay tany Mahajanga. Mihafihafy avokoa ireo Karana na mandeha eny an-dalana noho ny tahotra amin’ireo mpaka an-keriny.
Nampitandrina hatrany ny eo anivon’ny mpitandro filaminana fa voararan’ny lalàna ny fanapoahana tsipoapoaka. Hihetsika avokoa ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny rehetra ka hosamborina izay tratra. Ny 25 jona irery ihany eny amin’ny farihin’Anosy no azo anapoahana afomanga. Mba hisorohana ny tsy fandriampahalemana ny anton’izany, araka ny fanazavana voaray.